I-Semalt iphakamisa ku-URLitor - I-Cool Cool Web Iskrini se-Scraping & Data Extraction Tool
Umhleli we-URL uyisitsha esisha kodwa esisebenzayo se-web kanye nethuluzi lokukhipha idatha. Ukuze usebenzise i-URLitor, udinga nje ukwengeza uhlu lwawo wonke ama-URL okuqukethwe okufunayo ku-inthanethi kuthempelini enikeziwe. Khona-ke udinga ukucacisa isici se-HTML ofuna ukukhipha kumakhasi wewebhu bese uchofoza inkinobho yokuhambisa. Kulula njengaleyo. Ngalesi thuluzi, akudingeki wenze ikhophi noma unamathisele kusuka kusiphequluli.
xPath ulimi olusetshenziselwa ukucinga ulwazi kumafayela we-XML - stars mobile lebanon. Isebenzisa izinkulumo ezithile ukuze ukhethe ama-node-isethi noma ama-node kumafayela we-XML. Izinkulumo ukuthi i-XPath iyaziqonda zifana nalezo ezisetshenziselwa amafayili ekhompyutha noma imibhalo evamile.
Nakuba i-XPath isetshenziswe ngezilimi eziningana zokuhlela, leli thuluzi lakhiwe kubasebenzisi abangenalo ulwazi lohlelo. Ngakho-ke, akudingeki ukuba ube umlimi wokusebenzisa. Ngalesi thuluzi, ungasusa idatha kusuka kumakhasi amaningi we-HTML ne-XML.
Ukuze kube lula ukusebenzisa, izinkulumo ezimbalwa ezisetshenziswa kakhulu ze-XPath zihlongozwe kwimenyu yokudonsela phansi ukuze abasebenzisi bazodinga kuphela ukukhetha noma yikuphi kuye kuye ngenhloso yabo. Kodwa-ke, abasebenzisi abanolwazi lwe-XPath banenkululeko yokusebenzisa izinkulumo zabo ngezifiso noma nini lapho befisa..
Ithuluzi lenzelwe amandla okuba ama-URL angu-100 kwiseshini yokukhipha eyodwa, futhi kuthatha izinkulumo ezingu-10 ngesikhathi esisodwa. Ngamanye amazwi, ingadala idatha kusuka kuma-URL angu-100 ngesikhathi esisodwa.
Le nkulumo ikhetha ukwahlukanisa okwesibili;
2. // link [@ rel = 'canonical'] / @ href - Le nkulumo ikhetha indawo (ref) yomaki esetshenziselwa setha isici se-rel esilingana ne-canonical;
3. / html / ikhanda / meta [@ name = 'incazelo'] / @ okuqukethwe - Le nkulumo isetshenziselwa ukukhetha okuqukethwe;
4. // * [@ class = 'class-name'] - Ungasebenzisa le nkulumo ukukhetha zonke izakhi ' Isigaba CSS;
5. // h2 | // isihloko - Le nkulumo ingasetshenziswa ukukhetha kokubili i-H2 yokuqala nekhasi lekhasi;
6. // * [igama
= 'h1' noma igama
= 'isihloko'] - Le nkulumo isebenza ngokufana nalokhu ngenhla. Noma kunjalo, inkulumo ethulwe ngenhla ingcono ngoba isifushane;
7. // * [iqukethe (@class, 'thumb')] - Le nkulumo ikhetha zonke izinto ezinesigaba CSS futhi iqukethe 'isithupha' for extraction;
8. // umzali :: * [umbhalo
= 'Siyakwamukela'] - Le nkulumo ikhetha umzali kunoma iyiphi into enesihloko esithi 'Siyakwamukela ';
Leli thuluzi liyiBeta futhi lingasebenza namanye amaphutha. Kodwa-ke, kuseseyithuluzi elikhulu kubasebenzisi abanolwazi oluncane noma olungenalo uhlelo njengoba zonke izinkulumo ezisetshenziswe kaningi zihlongozwe kwimenyu njengoba kushiwo ngaphambili.